Hiran State - News: HS: Shir lagu qabtay Hotel Giyaajo
HS: Shir lagu qabtay Hotel Giyaajo
HS:- Shir uu soo qabanqaabiyay Ugaaska Beesha Xawaadle, Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif loogana hadlay kaalinta duubabka, waxgaradka iyo sidoo kale culumada Hawiye kaga aadan nabadeynta ummadda Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho.
Shirkan oo lagu qabtay Hotalka kaliya ee 5 starka ah ee ku yaala magaalada Mogdishu ee Giyaajo Hotel ayaa waxaa ka qaybgalay qaar ka mid ah ugaasyada, duubabka, culummada iyo waxgaradka Hawiye, iyadoo waxgaradka loo sameeyay shirkaan iyo duubabkoodu ay siweyn uga soo qeybgaleen.
Ugaas C/raxmaan oo shirka furay ayaa ka hadlay qiimaha ay nabaddu u leedahay bulshada Soomaaliyeed iyo kaalinta kaga aaddan duubabka, culumada iyo waxgaradka Hawiye nabadeynta ummadda Soomaaliyeed wuxuuna ugaasku ku boorriyay duubabka inay xil-weyn iska saaraan sidii looga shaqeyn lahaa dib u soo celinta nabadda ummadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale, Ugaaska ayaa ugu baaq waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool goobaha aysan nabaddu ka jirin inay u soo-jeestaan nabadeynta deegaannadooda; isagoo dadkana ugu baaqay inay heshiiyaan oo ay gacmaha is-qabsadaan.
Sh. Maxamuud Ciise iyo Sheekh C/risaaq Xaashi oo ka mid ahaa Culumadii kulanka ka hadlay iyaa iyagana waxgaradka iyo duubabka ku booriyay inay u is-taagaan nabadeynta iyo isku-keenidda ummadda Soomaaliyeed.
Ugaasyo, Wabaro iyo Duubadbka beesha Hawiye ee kulanka lagu casuumay ayaa sidoo kale aad ugu dheeraaday faa’iidooyinka ay leetahay nabada iyo doorka kaga aaddan nabadeynta ummadda Soomaaliyeed; waxayna ku baaqeen in la nabadeeyo la iskuna keeno ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah loona is-taago sidii looga shaqeyn lahaa nabadeyntooda.
Beesha Mudullood oo waxgaradkooda iyo duubabkoodusiweyn uga soo qeybgaleen kulanka ayaa kulanka kaga dhawaaqay inay qabanayaan gogol la mid ah mida uu maanta dhigay Ugaas C/raxmaan Ugaas Khaliif; taasoo looga tashan dooono sidii Soomaalida loo nabadeyn lahaa iyadoo ay si aan la qiyaasi karin u soo dhaweeyen kulankan Ugasyadii, Wabaradii iyo culimadii kulnaka ka qeybgalay.
Marka laga soo tago kulanka uu iclaamiyey Ugaaska besha Xawaadle aya hadane waxaa aad cajiib u aheyn in ay dadkii shirka ka qeybgalay aad ula yaabeen goobta uu ka dhacay shirku oo aheyd Hotel aad u qurux badan oo Five Star ah laguna magalaabo Giyaajo Hotel marka loo eego habka casriga ah ee uu u dhisan yahay iyo sida wanaagsan ee halkaas ay shaqaalaha iyo maamulku ugu soo dhaweeyen marti sharaftii uu shirka ku casuumay Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khalif.
Hotel Giyaajo ayaa waxuu leeyahay dhamaanba adeegyada kala duwan ee lagu yaqaano Hotelada dunida dacaladeeda ku yaala shirkanina waxuu ahaa shirkii ugu horeeyey ee ay ku yeeshaan duubabka dhaqanka Soomaaliyeed qaarkood Hotelkan.
Isku soo duuboo kaalinta duubabka Soomaaliyeed waa mid muhiim u ah jiritaanka bulsho siiba marka laga hadlayo duubabka aan ku imaan xiliyadii fowdada amaba shirarka ay intiisa badan bulshada iskugu yeeraan Ugaasyada, Salaadiinta, Wabarada, Imaamyada, boqorada umada Soomaaliyeed ee la garanayo.
shirkan ayaa u muuqda inuu bilaaw u yahay shirar kale oo sida muuqata ay hada gogoshiisu dhigayaan beelaha Mudulood si joogta ayaana shirarka danbe ugu soo bandhigi doonaa bulshada hadba waxii ay isla meel dhigaan.
· admin on April 07 2015 15:04:10 · 0 Comments · 3041 Reads ·
14,569,467 unique visits